Emmerson Mnangangwa Archives - What's On In Harare
Home Emmerson Mnangangwa
Harare News 27 June 2021
BULAWAYO – President Emmerson Mnangangwa on Saturday declared that “no-one will escape” being vaccinated for Covid-19, with Zimbabwe expecting 2.5 million vaccine doses from China in the next few days. Source: ‘No-one will escape’ Covid-19 injection, Mnangagwa declares – The Zimbabwean Vaccination remains voluntary in Zimbabwe, but government officials have been hinting that people who […]
The post ‘No-one will escape’ Covid-19 injection, Mnangagwa declares appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 14 September 2020
“I am now going to give instructions to invoke this treaty so that we can extradite these elements to face the law. This is not an exception in Zimbabwe, even in America they do so, they evoke this treaty if they have a fugitive citizen they want …” Source: Mnangagwa Breathing Fire, Demanding Arrest of […]
The post Mnangagwa Breathing Fire, Demanding Arrest of Exiled G40 Members ‘Peddling Lies’ About Zimbabwe appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …